Mgbe Harry zutere Cornelius… ọzọ! Oge Nyocha - cheapinternetsecuritysoftware.com
“Hey, onye mmeri.” Okwu mmeghe sitere n’aka onye mgbasa ozi mgbasa ozi akụkọ akụkọ bụ Cornelius Lysaght ka ọ nọdụrụ ala na onye mmeri Jump Jockey Harry Skelton iji tụgharịa uche na mkpọsa 2020/21.
Oge eji echefu echefu maka onye nnọchi anya gọọmentị Grosvenor anyị kwụsịrị na Sandown na Eprel, bụ ebe Harry nyere onyinye ngosi egwu mgbe ọ gbasịrị ndị mmeri 152 na ọnụọgụ 22% dị egwu. Nnukwu ihe.
Oge icheta maka Harry Skelton
N’ebe a, Harry na-ekwu okwu ncheta, ozi na ndị ọzọ. Gịnị bụ ihe ndị mere n’oge ya? Gịnị ka Sir Alex Ferguson gwara ya? Na onye ga – emeri mgbe ị na – alụ ọgụ na Bridget ruo n’ikpeazụ?
Nwee nche ma chọpụta!
Tags:Cornelius Harry Mgbe Nyocha Oge ọzọ zutere
Mengatasi gajah yang terlihat jelas di ruangan itu, jawabannya adalah …